‘इज्जत’ धान्ने ठेकदार महिला ! |
‘इज्जत’ धान्ने ठेकदार महिला !
प्रकाशित मिति :2018-05-13 17:16:38
बिहीबार एक डाक्टर महिलासँग भेट भयो । उनीसँग अन्तरवार्ता गर्ने पूर्व सल्लाह अनुसार कै भेट थियो त्यो । उनी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ । तर, भेटको उद्देश्य उनको विषय विज्ञतामा केन्द्रित थिएन । टेलिफोनमा नै विवाहपछि श्रीमान् र उनका परिवारबाट भएको हिंसाको विषयमा कुरा गर्ने टुंगो लागेको थियो ।
उनीभित्र विवाहको १० वर्षसम्म हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको पीडा उकुसमुकुस भएर बसेका रहेछन् । तर, कुराकानी एक १७ वर्षकी किशोरी आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भए पछि उनीकहाँ आएको घटनाबाट शुरु गरिन् ।
९ महिने गर्भवती किशोरीका बुबाआमा छोरी बोकेर उनीकहाँ आए । अबको विकल्प के भनेर उनीसँग रोइकराई गरे । उनले प्रहरीमा उजुरी गर्न सुझाइन् । तर, उनीहरूले ‘इज्जत’ को तँगारो देखाएछन् । डाक्टरले नै दिएको सुझाव अनुसार किशोरीका बुबाआमाले छोरीलाई पुनस्र्थापना केन्द्र पठाए ।
किशोरीले सन्तान जन्माइन् । शिशु धर्म सन्तानको रुपमा हस्तान्तरण भयो । तर, आफ्नै काकाबाट बलात्कृत किशोरी न्यायको ढोकासम्म पुगिनन् । उनीहरूले काकालाई कारबाही गर्नुको सट्टा घटना गुपचुप नै राखे ।
‘यस्तो अपराधमा त उजुरी गर्नुपर्ने नि !’
मेरो प्रश्नमा डाक्टरले आफ्नै भोगाई सुनाइन् ‘आफूलाई भएको हिंसा विरुद्ध न्यायको लडाइँमा निस्किए त्यहि महिलाले थप सयौं हिंसा सहनुपर्छ । बरु गुपचुप राखेकै बेस ।’
उनले १० वर्ष लामो वैवाहिक जीवनमा हिंसाको रुप चरम भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताइन् । कानूनी रुपमा न्यायको लडाइँ लड्न पटकपटक हिंसामा परेको आफ्नै अनुभव रहेछ उनको ।
आफूले भोगेको यातना संक्षेपमा सुनाईन् :
मेरो माइती पोखरा हो । २०६३ मंसिर २० गते काठमाडौंको घरानियाँ केटासँग मेरो विवाह भयो । तर विहेको तेस्रो दिनदेखि दाइजो नल्याएको निहुँमा हिंसा सुरु भयो । माइतीमा गएर रुँदै हिंसाबारे सुनाएँ पनि । बुबाआमाले सहनुपर्छ भन्नुभयो । सहें पनि ।
४ वर्षसम्म घरमै बसें । जागिर गरें । श्रीमान्लाई पनि डाक्टर पढाएँ । गर्भवती नहुन्जेल त सहें । तर गर्भमा छोरी भएको थाहा भएदेखि हिंसाको रुप चरम हुन थाल्यो ।
१८ हप्ताको गर्भ जाँचका क्रममा गरिएको भिडियो एक्सरेमा छोरी भएको रेडियोलोजीष्टले श्रीमानलाई भनिदिए । त्यसपछि त एबोर्सन (गर्भपतन) गराउन दबाब दिन थाले ।
गर्भवती नहुन्जेलसम्म आफ्नो सबै कमाई लगेर सासुलाई दिन्थें । मलाई एटिएम मेसिन झैं ठानेका रहेछन् । जब गर्भमा छोरी आई, त्यसपछि त घरमा बस्नै नसक्ने भयो ।
छोरी जन्मिएर न्वारान नहुन्जेल घर बस्दा पनि राम्रो स्याहार पाइन । मेरो छोरीलाई कसैले देखि सहन्थेनन् । त्यसपछि माइतीको संरक्षणमा बसें । आमाले छोरी हुकाईदिनुभयो । मेरो छोरीले कहिल्यै बुबा र उसको परिवारबाट माया पाइनन् । अहिले मेरो छोरी ८ वर्षकी भईन् ।
विहेको ४ वर्षपछि म घर बसिन । जहाँ मलाई र मेरो छोरीलाई सम्मान छैन, त्यहाँ बस्न उपयुक्त पनि ठानिन । म आफै पनि सक्षम छु । छोरी हुर्काउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो । १० वर्षपछि २०७३ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दिएँ ।
श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया अघि बढेपछि पाइला पाइलामा हिंसा थपियो । सम्बन्ध विच्छेदअघि श्रीमानका परिवारबाट हिंसा भयो । मैले सहेको थिएँ । बाहिर अरुलाई श्रीमानको व्यवहारबारे थाहा थिएन । त्यतिबेलासम्म मलाई हेर्ने नजर राम्रो थियो । किनकी जस्तो रुपमा भए पनि श्रीमान छ भन्ने हुन्थ्यो ।
जब म सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयामा गएँ त्यसपछि मैमाथि सहकर्मीबाट समेत हिंसा भयो । अदालत गयो वकिलबाट, न्यायाधीशबाटै अपमानजनक शब्द प्रयोग, कार्यालयमा आफूभन्दा जुनियरबाट हिंसा ।
न्यायको लडाइँमा निस्किए पछि त पाइलै पिच्छे हिंसा भोगे मैले । श्रीमानको यातना सहेर बसुन्जेल कहिल्यै नराम्रो नदेख्ने समाज, न्याय माग्न निस्किएपछि मलाई नै नराम्रो देख्न थाल्यो । सरकारी अस्पतालमा काम गर्थें, म न्यायको लडाईंमा छु भन्ने थाहा भएपछि जागिरबाट पनि हात धुनुपर्यो ।
मलाई अदालती प्रकृया अघि बढाउन मन लागेन । २०७४ सालमा मेलमिलापबाट सम्बन्ध बिच्छेद गर्न राजी भएँ । अहिले छोरी र म स्वतन्त्र छौं । खुसी छौं । कसैबाट दबाब अनि प्रभाव सहनु परेको छैन ।’
आफूमाथिको हिंसाको श्रृङ्खला सुनाइसकेपछि उनले एउटा सर्त राखिन्, ‘नामसहित डिटेलमा घटना नलेखिदिनु ।’ आफ्नो परिचयसहित घटना नखुलाउनुपर्ने उनको कारण एकमात्रै थियो, ‘इज्जत’ ।
अब अर्को घटना तर्फ लागौं । बैतडीको एक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले महिलाखबर सहकर्मी इन्द्रसरा खड्कासँग सम्पर्क गरिन् । आफूमाथी छोरा नजन्माएको निहुँमा भएको हिंसाको श्रृङ्खला लेखिदिनुस् भनिन् । श्रीमान्ले कुटेको चोटसहित फोटो पनि पठाईन् । (महिलाखबरसँग उनले पठाएको तस्बिर सुरक्षित छ ।)
यस्तो रहेछ गाउँपालिका उपाध्यक्षले खेपेको हिंसाः
२०६७ असार १ गते मेरो बिहे भयो । हजुरआमाको रहरले १८ वर्षकै उमेरमा मेरो गरिदिए । केटा कस्तो छ मलाई थाहा थिएन । घरपरिवारले बिहे गरिदिन केटा खोजिसकेपछि मैले असहमति जनाउन सम्भवै थिएन ।
श्रीमान शिक्षक हुन् । शिक्षक श्रीमान पाएपछि राम्रै परिवारमा परेछु भन्ने थियो । तर, त्यो खुसी दुई दिनसम्म पनि टिकेन । बिहेको तेस्रो दिनदेखि सुरु भयो, सासूससुराको कचकच ।
एक संस्थामा सहजकर्ताको रुपमा काम गररे आफ्नो खर्च आफै जुटाउन थालें । फिल्डमा काम गर्दा पनि घरपरिवारले अनेकथरी कुरा गर्ने गर्थे । घरको काम नगरी बाहिर हिँड्छे भनेर कुटपिट भयो । घरपरिवारको कुरा सुनेर श्रीमानले पनि कुटपिट गर्न थाले । सासूले त कति दिन पिटिन् कति, सहेरै बसें ।
पहिलो सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिइन् । छोरा जन्माउन नसकेको टोकसो सुरु भयो । दोस्रो पनि छोरी नै जन्मी । जेठी छोरी ३ वर्षकी छे । कान्छी छोरी १३ महिनाकी । कान्छी छोरी जन्मेपछि श्रीमानको कचकच झन् बढ्यो । आफ्नै परिवारको कुरा बाहिर ल्याएर के बदनाम गर्नु भन्ने लाग्यो । त्यसैले उजुरी कतै गरेको छैन ।
मैले विद्यार्थी उमेरदेखि राजनीति गरें । बिहे पछि राजनीति गर्न पनि छोडिसकेको थिएँ । स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमाले पार्टीले टिकट दियो । त्यतिखेर कान्छी छोरी ६ महिनाको थिइ । छोरी पिठ्यूँमै बोकेर प्रचारप्रसार गरें । चुनाव जित्न सफल पनि भएँ ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको १ वर्ष भयो । जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि अहिले जहाँ कार्यक्रम भयो पुग्नै पर्छ । दिनरात भन्न पाईंदैन । जतिखेर जहाँ काम पर्यो, हिँड्नैपर्छ ।
यो काम श्रीमानलाई मन पर्दैन, घरपरिवारलाई त झनै मन पर्दैन । कार्यक्रममा जाँदा पनि केटासँग संगत छ भन्दै चरित्रमा प्रश्न उठाउँछन् । कुटपिट हुन्छ ।
अहिले त श्रीमानले छोरा चाहियो भन्दै दिनरात कुटपिट गर्छन् । म कसरी जन्माउँ ? छोरा जन्माउने मेरो वशको कुरा पनि होइन । यो कुरा शिक्षक श्रीमानले बुझेर पनि बुझ पचाउछन् । छोरा नजन्मिनुको दोष मेरो थाप्लोमा छ ।
म त गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष । न्यायिक समितिको संयोजक पनि । म आफै हिंसामा छु । दिनहुँ मेरो जस्तै पीडा बोकेर महिलाहरू आउँछन् । आफैले न्याय पाउन सकेकी छैन । उनीहरूलाई कसरी न्याय दिउँ !’
आफ्ना कुरा राखिसकेपछि उनले फेरि सम्पर्क गरिन् । अनि अनुरोध गरिन्, ‘अहिले समाचार नलेखिदिनु ।’ हामीले प्रश्न गर्यौं किन ? उनको पनि डाक्टरको जस्तै जवाफ थियो, ‘परिवारको इज्जतको कुरा छ । यो कुरा बाहिर आए पछि लाज होला ।’
माथिका दुवै महिला सम्मानित पदमा छन् । आफ्नो जीवन चलाउन दुवै सक्षम पनि छन् । श्रीमान र परिवारको आम्दानीमा भर परेका पनि छैनन् । तर पनि उनीहरू तथाकथित ‘इज्जत’ का कारण आफूमाथिको हिंसा लुकाएर राखेका छन् ।
हिंसा सार्वजनिक गर्दा ‘इज्जत’ जाने डर छ । त्यो ‘इज्जत’ नामको तँगारोभित्र आफूलाई गुम्स्याएर राखेका छन् यी महिलाहरूले । अनि ‘श्रीमान’ नामको पुरुष जसले दिनदिनै यातना दिन्छ । हो, उसैको प्रतिष्ठाका खातिर – आफ्नो स्वतन्त्रलाई बन्धकी राखेर ।
उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ, आफूजस्तै मान्छेहरूको समूह नै समाज हो । तर, हिंसाबारे मुख खोले समाजको अगाडि कसरी मुख देखाउने ? यिनै प्रश्नहरूले घेरिएका छन्, सक्षम महिला पनि ।
पाइला पाइलामा पाएको यातना लुकाएर ‘इज्जत’ जोगाइदिनुपर्ने ठेक्का महिलाको मात्र हो ?